Filohan’ny HCC: “Tsy maintsy iadiana ny hosoka sy ny hala-bato” | NewsMada
Filohan’ny HCC: “Tsy maintsy iadiana ny hosoka sy ny hala-bato”
“Betsaka ny resaka mandeha hoe kara-panondro sandoka, kara-pifidianana sandoka. Raha sanatria misy izany, tokony handray andraikitra: entina avy hatrany ireo olona any amin’ny mpitandro filaminana, na miantso ny mpitandro filaminana. Tsy tokony hisalasala amin’izany isika fa tsy maintsy miady amin’ny hoe hala-bato na hosoka.” hoy ny filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean-Eric, teny Ankadindravola Ivato, omaly. Tsy maintsy mandray andraikitra isika amin’ny ambaratonga maro samihafa. Ho azy, fahavalom-pirenena sy fahavalon’Andriamanitra izay mitady hanakorontana ny fifidianana. Anjaran’ny tsirairay ny mieritreritra izay.
Hohafainganina ny valim-pifidianana
Misy fotoana izay nomen’ny lalàna hoe hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy, any amin’ny volana janoary. Ezahina araka ny azo atao ny hamoahana azy aloha raha tratra, miankina amin’ny fahazoana ny antontan-tarasim-pifidianana avy amin’ireo birao fandatsaham-bato rehetra.
Na izany aza, nandray fepetra ny HCC amin’izao fihodinana faharoa izao: misy ny fitanana an-tsoratra (PV) sy ny taratasy fanisam-bato halainy mba haha haingana azy. Efa misy fandrindrana miaraka amin’ny Ceni. Ezahina mba ho haingana ny valim-pifidianana. Miankina amin’ny fitoriana koa io. Na izany aza, tsy maintsy manana filoham-pirenena isika, farafahelany ny 25 janoary 2019.
Efa mandray fitoriana ny HCC
Vonona amin’ny fandraisana fitoriana ny HCC, nanomboka omaly. Mila fanazavana: inona ny karazana fitoriana momba ny fizotran’ny fifidianana na ny amin’ny valim-pifidianana? Raha ny amin’ny hoe misy mizara vola na mampiasa kara-panondro na kara-pifidianana sandoka, entina avy hatrany any amin’ny fitsarana mivantana fa tsy mandalo any amin’ny Ceni na ny HCC.
Une réponse à "Filohan’ny HCC: “Tsy maintsy iadiana ny hosoka sy ny hala-bato”"
Rafia 31/12/2018 à 11:12
Enga anie ka mba hitsara ny tena marina ianareo ary hijoro am maha fitaratra anareo misaotra ny Tompo